Ma Dhisnaa Berri? – W/Q: Faadumo Buuni | Somaliland Post
Home Maqaallo Ma Dhisnaa Berri? – W/Q: Faadumo Buuni
Dhisidda maantu, waxay inagu hoggaaminaysaa in aynu si wacan u dhisi karno berri. Dhisi kari mayno berri, haddaynaan maanta ka shidaal qaadan. Haddaynaan halka aynu fadhinno ka kicin, suurto gal maahaa in aynu berry dhisno. Haddaynnu dadka xumaantooda ka shaqaynno, guuldarradooda ku faraxnno. Daadinta dhiiggoodana dhago-Nugayl u yeelanno. Iskudirkooda ka shaqaynno. Kala kaxayntoodana ku tallaabsanno. lagama yaabo in aynu iyaga iyo innaguba hagaagnno oo aynu hiigsi yeelanno.
Hayaan dheer iyo u hagar-bixid bay inooga baahantahay dhisidda berri. Beerista han fog iyo himilo wanaagsani waa halka laga bilaabayo hirka aynu rabno in aynu gaadhno.
Dadka aynu jacayl ku dhex beerno, kaasi oo carradiisu nafaqaysan tahay. Warraabkiisu yahay mid maalinle ah si ay jirridiisu u adkaato. Caaleemaha uu bixinaayaana, noqdaan kuwo soo saaraya midho wacan.
Yeynaan sugin inta, hebel iyo heblaayo ina hagaajiyaan ee ay ina toosinayaan, balse aynu ka bilowno hagaajinta iyo toosnaanta, nafaheenna iyo u hagarbixidda weliba hogotusaalaynta hankeeda iyo horumarkeeda.
Haddaynaan, sidaas samaynin waxaynu noqon doonaa daawadayaal. Afkalaqaadna ku noqdo dadka horumarkoodu. Waxaynu inbadan is waydiin doonaa goorta ay gaadheen horumarkan aadka u baaxadda wayn iyo waqtiga ay siiyeen. Innagoo tii la yaabban uunbaynu haddana arki doonaa horumarkale oo ka sii wanaagsan kii aflaqaadka inagu noqday. Halkaasina waa halkii la inagaga dhaqaaqi lahaa. Waa halkii aynu dibinta ruuggi lahayn. Waa halkii aynu dib u milicsan lahayn waqtigii badnaa ee inaga lumay. Haa. Waa halkii aynu iswaydiin lahayn toloow miyey soo noqon doontaa waqtigii aynu dayrinnay.
Waxaynu inteenna badani nahay, sugayaal, suga dadka kale waxay soo sameeyeen. Waxaynu nahay adeegsadayaal, adeegsada waxay dadka alifeen.
Badanaa oo haddana badanaa, awoodaha Rabbi ina siiyey ee aynaan arkayn isla markaana luminay. Keliya waxa inoo muuqda awoodaha dadka kale. Waxanu se’ haysannaa fursado badan oo aynu kaga faa’idaysanaynno awoodaheenna Rabbi inagu mannaystay.
Ugu danbayn in aynu si wacan u dhisno berri waxay ku xidhantahay; In aynu ka tagno waxkasta oo inaga qaloocinaya ama inaga duminaya dhismaha berri. In aynu waqti siin waxkasta oo dib u dhigaya horusocodka iyo himilada dhisamaha berri; in aynu joojinno, waxkasta oo aynaan ku faraxsanayn sii wadkiisa; In aynu ka tanaasulnno waxkasta oo aan u fiicnayn mustaqbalkeenna iyo aayaheenna danbe, una taanaasulno waxkasta oo u wanaagsan anbaqaadka iyo aayaheenna danbe.